Vaovao - Fenitry ny fanaraha-maso ny fanorenana scaffolding pan buckle
Ny socket karazana buckle karazana sodina scaffolding dia karazana vaovao vy sodina scaffolding amin'ny tena-hihidy tetikasa, raha ampitahaina amin'ny nentim-paharazana fastener karazana overhanging scaffolding, misy fanatsarana lehibe eo amin'ny fananganana sy ny fandravana fahombiazana, azo itokisana, ny vidiny mitsitsy sy ny angovo famonjena sy fiarovana ny tontolo iainana.
Na izany aza, ny fanorenana ny socket-karazana takelaka buckle vy sodina scaffolding ihany koa ny manana ny fitsapana fenitra, anio isika dia hianatra bebe kokoa.
Voalohany, ny fisafoana sy ny fanombanana ny socket karazana sodina scaffolding dia tokony hifanaraka amin'ny fenitra amin'izao fotoana izao ny orinasa "fanorenana faladiany karazana vy sodina scaffolding * fepetra arahana ara-teknika" JGJ231 fepetra.
Faharoa, ny fisafoana sy ny fanombanana ny socket karazana sodina scaffolding tetikasa fiantohana dia ahitana: fanorenana fandaharana, rafitra fototra, frame fahamarinan-toerana, bar Settings, scaffolding, fanaterana sy ny fanekena.
Ny singa ankapobeny dia misy: fiarovana ny frame, fifandraisana amin'ny tsorakazo, fitaovana singa, fidirana.
Ny haavon'ny fananganana ny socket karazana buckle karazana sodina scaffolding dia tsy tokony hihoatra ny 24m.
Fahatelo, ny fisafoana sy ny fanombanana ny socket karazana sodina scaffolding tetikasa fiantohana dia tokony hanaraka ireto fepetra manaraka ireto.
(A), fandaharana fanorenana
Ny fananganana scaffolding dia tokony homanina ho an'ny drafitra fanorenana manokana, tokony hokajiana ny famolavolana rafitra; ny drafitra fanorenana manokana dia tokony hojerena sy ankatoavina araka ny fepetra.
Soraty ny drafitra ankapobeny amin'ny drafitra firafitry ny talantalana, ny haavony, ny sary fizarana
(II), ny fototry ny tsato-kazo mitsangana
Ny fanorenan'ny tsanganana dia tokony ho levona sy hamatsiana araka ny fepetra takian'ny fandaharan'asa, ary tokony horaisina ny fepetra fanariana rano.
Soil fototra eo amin'ny farany ambany ny uprights nametraka pad sy Adjustable fototra, ary tokony mahafeno ny fepetra takiana.
Ny tsorakazo lava sy mivelatra amin'ny rafitra dia apetraka mifanaraka amin'ny fepetra takiana.
Ny fanambanin'ny tsato-kazo dia tokony hapetraka fototra azo amboarina, azo apetraka eo amin'ny farany ambany amin'ny takelaka pad pole, ny halavan'ny takelaka pad dia tsy tokony ho latsaky ny 2 span.